एक घण्टामा ५.०४ अंक बढ्यो नेप्से परिसूचक, ३४ करोडभन्दा बढीको कारोबार
असोज २९, काठमाडौं । मंगलवारदेखि निरन्तर घटेको शेयर बजार बिहीवार भने कारोबार शुरुभएदेखि बढीरहेको छ ।
बुधवार ७ दशमलव ४२ अंक घटेर १ हजार ५६१ दशमलव १७ विन्दुमा बन्द भएको बजार बिहीवार १ हजार ५६१ दशमलव १७ विन्दुदेखि खुला भएको हो । यो दिन कारोबारको पहिलो घण्टामै नेप्से परिसूचक ५ दशमलव शून्य ४ अंक बढेर १ हजार ५६६ दशमलव २० विन्दुमा पुगेको छ । बुधवार ७ दशमलव ४२ अंक घटेर बजार १ हजार ५६१ दशमलव १७ विन्दुदेखि खुला भएको हो ।
बिहीवार कारोबारको २० मिनेटमै १ हजार ५७९ विन्दु बजारले पार गरेको थियो । अर्थमन्त्रिका रुपमा विष्णु पौडेल नियुक्त भएका छन् । नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा उच्च विन्दु कायम गर्दाका समयमा पनि पौडेललेनै अर्थमन्त्रिको कार्यभार सम्हालेका थिए । शेयर बजारका लागि फापेका अर्थमन्त्रिको रुपमा चिनिएका पौडेललाई बिहीवारको कारोबारले सकारात्मक रुपमा स्वागत गरेको देखिन्छ ।
यो दिन एक घण्टामा १७५ ओटा कम्पनीको रू. ३४ करोड ३१ लाख ७ हजार बराबरको ११ लाख ९० हजार ६९१ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
यस दिन लाभांश सार्वजनिक गरेको शिवम् सिमेण्टको सर्वाधिक रकम बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । पहिलो घण्टामा उक्त कम्पनीको रू. २ करोड ५० लाख ४७ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । कम्पनीले यो वर्ष २४ दशमलव २१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
एक घण्टामा नेपाल फाइनान्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक ९ दशमलव ८७ प्रतिशत बढेको छ भने नेपाल हाइड्रो डेभलपमेण्टको सर्वाधिक ४ दशमलव ५५ प्रतिशतले घटेको छ ।
बिहीवार पहिलो घण्टाको कारोबारमा व्यापारिक समुहको शून्य दशमलव १९ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा समुहको शून्य दशमलव शून्य ७ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ भने बाँकी समुहको बढेको छ ।
यो अवधिसम्म सर्वाधिक उत्पादन तथा प्रशोधन समुहको परिसूचक १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले बढेको छ ।